देशभर संक्रमित हुनेको संख्या ९० हजार पार, उपत्यकामा २४ घण्टामा थप १ हजार १७ – Sajha Pati
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ५ सय ५१ जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । डा. गौतमका अनुसार ११ हजार ४७ जनाको पिसिआर गर्दा १ हजार ५५१ जनामा संक्रमण देखिएका हुन् । यस्तै, २ हजार ३ सय ४० जना डिस्चार्ज भएक छन् । २४ घण्टामा कोरोनाबाट ९ जनाको मृत्यु भएको छ । देशभर संक्रमित हुनेको संख्या ९० हजार ८१४ पुगेको छ ।
त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा २४ घण्टामा थप १ हजार १७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले काठमाडौँमा ७ सय ८३, ललितपुरमा १ सय १८ र भक्तपुरमा १ सय १६ जना संक्रमित देखिएका बताएका छन् ।
खाद्य अनुज्ञा पत्र न लिएका कालीमाटी क्षेत्रबाट पापड, पिठो, दाल, मसला, टमाटो सस बरामद